10 “Saa bere no Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ, ‘Sen abopon abien te sɛ kan de no+ na fa bra me nkyɛn wɔ bepɔw no so. Afei fa dua yɛ adaka.+ 2 Mɛkyerɛw nsɛm a na ɛwɔ abopon a edi kan a wububuu no so no agu foforo no so, na fa sie adaka no mu.’ 3 Enti mede ɔkanto dua yɛɛ adaka na mesen abopon abien te sɛ kan de no.+ Afei mede abopon abien no kɔɔ bepɔw no so. 4 Na ɔkyerɛw Nsɛm Du+ no guu abopon no so sɛnea na ɛwɔ kan de no so no.+ Eyi ne nsɛm a Yehowa fi ogya mu ka kyerɛɛ mo wɔ bepɔw no ho,+ da a asafo no bɔɔ gua no.+ Yehowa wiei no, ɔde maa me. 5 Afei misian fii bepɔw no so+ na mede abopon no besiee adaka a mayɛ no mu sɛnea Yehowa hyɛe sɛ menyɛ no.+ 6 “Israelfo tu fii Beerot Bene-Yaakan+ kɔɔ Mosera. Ɛhɔ na Aaron wui ma wosiee no,+ na ne ba Eleasar sii n’ananmu dii sɔfo.+ 7 Afei wofi hɔ kɔɔ Gudgoda, na wofi Gudgoda kɔɔ Yotbata,+ asase a nsubɔnten sen wɔ so no. 8 “Saa bere no Yehowa yii Lewi abusuakuw+ no sɛ wɔnsoa Yehowa apam adaka no+ na wonnyina Yehowa anim nsom no+ na wɔmfa ne din nhyira nnipa+ de besi nnɛ. 9 Eyi nti na Lewi annya ne nuanom agyapade no bi no.+ Yehowa ne n’agyapade sɛnea Yehowa mo Nyankopɔn ka kyerɛɛ no no.+ 10 Midii adaduanan wɔ bepɔw no so sɛ kan no, awia ne anadwo,+ na saa bere no nso Yehowa tiee me.+ Ná Yehowa mpɛ sɛ ɔsɛe mo.+ 11 Afei Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ, ‘Sɔre di ɔman no anim ma wɔnkɔfa asase a mekaa wɔn agyanom ntam sɛ mede bɛma wɔn no.’+ 12 “Afei Israel, dɛn na Yehowa wo Nyankopɔn hwehwɛ fi wo hɔ+ sɛ wubesuro+ Yehowa wo Nyankopɔn na woanantew n’akwan nyinaa so+ na woadɔ no,+ na wode wo koma nyinaa ne wo kra nyinaa asom Yehowa wo Nyankopɔn,+ 13 na woadi Yehowa ahyɛde ne ne mmara+ a mede rema wo nnɛ yi so, na asi wo yiye?+ 14 Kae sɛ ɔsoro, ɔsoro mu soro ankasa, ne asase ne nea ɛwɔ so nyinaa yɛ Yehowa wo Nyankopɔn dea.+ 15 W’agyanom nkutoo na Yehowa kaa wɔn bataa ne ho yii ne dɔ adi kyerɛɛ wɔn. Enti na wayi mo a moyɛ wɔn nkyirimma+ no afi aman nyinaa mu, sɛnea ɛte nnɛ yi. 16 Enti muntwa mo koma twetia+ na munnsen mo kɔn bio.+ 17 Yehowa mo Nyankopɔn yɛ anyame mu Onyankopɔn+ ne awuranom mu Awurade,+ Onyankopɔn tumfoɔ pumpuni a ne ho yɛ hu.+ Ɔnyɛ animhwɛ+ na onnye adanmude biara.+ 18 Ɔno na obu atɛn ma nnyanka ne akunafo,+ na ɔdɔ ahɔho+ ma wɔn aduan ne nkataho. 19 Mo nso monnɔ ahɔho+ efisɛ na moyɛ ahɔho wɔ Egypt asase so.+ 20 “Yehowa wo Nyankopɔn na suro no.+ Ɔno na som no,+ ne ho na fa wo ho fam,+ na ne din na fa ka ntam.+ 21 Ɔno na kamfo no,+ na ɔno ne wo Nyankopɔn a wayɛ anwonwade akɛse a wode w’ani ahu yi.+ 22 Akra aduɔson na w’agyanom de wɔn kɔɔ Egypt,+ nanso mprempren Yehowa wo Nyankopɔn ama woayɛ dɔm kɛse sɛ ɔsoro nsoromma.+